TY160-3 bulldozer is semi-rigid, simba shanduko, simba rinobatsira kudzora, pilot hydraulic application inodzorwa, ine imwechete lever inodzorwa yepuraneti gearbox. Iyo ine yakasarudzika kabhini, mutsara wemazuva ano wakagadzirirwa kuvhara zvikamu uye kusimbisa yekupedzisira drive.
TY160-3 bulldozer is 160 horsepower track-type dozer ine hydraulic direct drive, semi-rigid suspended uye hydraulic inobatsira kushanda, pilot hydraulic blade control uye single level steering uye braking control.
TY160-3 bulldozer inoratidzwa nehupamhi hwepamusoro, yakavhurika maonero, yakagadziridzwa chimiro, nyore kushanda uye sevhisi ine mutengo wakaderera uye yakavimbika mhando yese. Inogona kuve yakashongedzerwa nemashank matatu ripper, U-blade (7.4 cubic metres kugona) uye zvimwe zvingasarudzwa.
TY160-3 bulldozer inoshandiswa pakubata ivhu mukugadzira migwagwa, gwenga nemafuta-munda uchishanda, minda yekurima uye chiteshi chengarava, kudiridza nemagetsi emagetsi engineering, migodhi uye mamwe mamiriro einjiniya.
Kushanda uremu (kusanganisira ripper) (Kg): 17000
Ground pressure (kusanganisira ripper) (KPa): 67
Track geji(mm): 1880
Min. pasi pemvumo (mm):405
Dozing simba (m): 4.5
Kufara kweblade (mm): 3390
Zviyero zvakazara (mm):5140×3388×3032
mhando: Weichai WD10G178E25
Yakatemerwa shanduko (rpm): 1850
Rated simba (KW/HP):131/175
Flywheel simba (KW/HP): 121/165
Kuyerwa kushandiswa kwemafuta (g/KWh): ≤218
Type: Swing mhando yedanda rakapfapfaidzwa.
Kureba kweshangu (mm): 510
Pamberi (Km/h) 0-3.29 0-5.82 0-9.63
Kumashure (Km/h) 0-4.28 0-7.59 0-12.53
Sisitimu inobudaL/min: 213
Steering clutch: Multiple-disc oiri simba simbi dhisiki yakamanikidzwa nechirimo. hydraulic inoshanda.
Final drive: Yekupedzisira dhiraivha yakaderedzwa kaviri ne spur giya uye segment sprocket, iyo yakasimbiswa ne duo-cone chisimbiso.
Zvakapfuura: TY165-3 Bulldozer
Zvinotevera: SD6N Bulldozer